Iphayini lase-Australia Eliphethwe
Real Estate Listings: » Business Directory » Home Improvement Contractors » AU » Iphayini lase-Australia Eliphethwe1
Australia, Melbourne, 3062
Ikhodi Yokuposa: 3062
I-Australian Treated Pine ingomunye wabahlinzeki abahamba phambili beTimber Products eMelbourne, e-Australia. Shayela manje ku-03 9305 2000 uma udinga ukwelulekwa okwengeziwe, abasebenzi bethu abathengisa ngochwepheshe bazojabula kakhulu ukukusiza ngemibuzo yakho.
Ibhaliswe ku 16. Dec 2019
Xhumana nomkhangisi 039305xxxx
Ibhaliswe ku December 16, 2019
2 Freight Drive, Somerton, 3062, Victoria
I-Australia, eyaziwa ngokusemthethweni njengeCommonwealth of Australia, iyizwe elizimele elihlanganisa izwekazi lase-Australia, isiqhingi saseTasmania, kanye neziqhingi eziningi ezincane. Yizwe elikhulu kunawo wonke e-Oceania kanye nezwe lesithupha ngobukhulu emhlabeni endaweni ephelele. Inani lezigidi ezingama-26 lisedolobheni kakhulu futhi ligxile kakhulu olwandle olusempumalanga. Inhlokodolobha yase-Australia yiCanberra, futhi idolobha layo elikhulu kakhulu yiSydney. Ezinye izindawo ezinkulu zedolobha elikhulu iMelbourne, iBrisbane, iPerth, ne-Adelaide. Abantu bomdabu base-Australia bahlala ezwenikazi iminyaka engaba ngu-65,000 ngaphambi kokufika kokuqala kwabahloli bamazwe baseDashi ekuqaleni kwekhulu le-17, abayiqamba ngokuthi yiNew Holland. Ngo-1770, ingxenye esempumalanga ye-Australia yafunwa yi-Great Britain futhi yaqala yaxazululwa ngokuthuthwa kwezijeziso eziya koloni laseNew South Wales kusukela ngomhlaka-26 Januwari 1788, usuku okwaba usuku lukazwelonke lwase-Australia. Inani labantu lakhula ngokuqinile emashumini eminyaka alandelayo, kwathi ngesikhathi se-1850s sokugijimisa igolide, iningi lezwekazi lase lihlolisiswe ngabahlali baseYurophu kanye namakholoni ayisihlanu azibusayo. Ngomhlaka 1 kuJanuwari 1901, amakoloni ayisithupha ahlangana, enza iCommonwealth of Australia. I-Australia selokhu yagcina uhlelo lwezombusazwe lwenkululeko yenkululeko olusebenza njengombusi wobumbano kumthethosisekelo wezwe, ohlanganisa izifunda eziyisithupha nezindawo eziyishumi.